Kwete, iyo iPhone 13 hairatidzi bhatiri muzana mune mamiriro bar | IPhone nhau
Maawa mashoma isati yatanga kuratidzwa kweiyo itsva iPhone 13, iPad uye Apple Watch mhando Mufananidzo unotenderedzwa pamambure umo iwe waigona kuona iyo iPhone ine bhatiri muzana padyo padhuze neiyo notch, mune status bar.
Pakupedzisira zvese zvinoita kunge kuburitsa kwekunyepedzera, zvirinani nekukanganisa pachigadzirwa. Zvese Screenshots iyo yatinogona kuona yeiyo iPhone 13 uye nyowani iPhone 13 Pro ichiri kusaratidza huwandu hwebhatiri uyen yekumusoro kurudyi, zvichiratidza kuti izvi hazvizove zvakadaro.
Anogona here mushandisi mumamiriro ekugadzirisa kuti awedzere ruzivo urwu rwebhatiri kune bar yemamiriro? Zvakanaka, isu hatizive izvi parizvino asi zvinoita sezviri pachena ndekwekuti Xcode 13 simulator yeiyo nyowani iPhone 13 Pro Max ine nzvimbo yakakura yekuratidza ruzivo rwekuvhara uye mabhaji eWi-Fi. Parizvino, avo vanga vachitarisira kuona iri bhatiri ruzivo nepesenti iyo isingakande tauro parizvino, zvinogona kunge iri sarudzo inowedzerwa mukumisikidzwa iyo inobvumidza kuti iratidzwe.
Parizvino, zvatiri kujekesa nezvazvo ndeyekuti sarudzo yekuwedzera kana kudzima iyi ruzivo (muzana rebhatiri) paPhones dzisina notch, inowanikwa, saka avo vanoda kuona ruzivo urwu havafanire kurasikirwa netariro. Mukusvikira isingasviki vhiki isu tinobvisa kusahadzika kana ongororo dzekutanga dzeiyo nyowani iPhone 13 dzatanga kuoneka, zvirokwazvo mune mamwe acho tichaona kana zvichikwanisika kuwedzera ruzivo urwu mubharani renzvimbo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 13 » Kwete, iyo iPhone 13 hairatidzi bhatiri muzana mune mamiriro bar